Soomaaliya, 09 February 2019
Madaxweyne Biixi iyo Oglan Baker oo ka wada hadley wada-hadalladii Somaliland iyo Soomaaliya
Madaxweynaha Somailand Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in ay dalbanayaan in wada-hadalladii u dhaxeeyay Somaliland iyo dowladda Soomaaliya ay dalal kale qayb ka noqdaan, ka dib markii ay midho-dhal noqon waayeen.
Muqdisho: Booliska oo ballan qaaday wax ka qabashada dilka askarta lagu eedeyo
Muddooyinkii u dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanayay falalka dad shacab ah oo ku dhinta gacanta askar ka tirsan ciidamada Soomaaliya.
Ku soo dhawaada barnaamijka Dhacdooyinka Toddobaadka, oo aad maanta oo kale dhageysataan. Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo jeedinaya.
Faaqidaadda: Shirka Shidaalka Soomaaliya
Ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadna oo aan maanta diiradda ku saareyno shirka shidaalka Soomaaliya ee London shalay lagu soo gaba gabeeyay.
Warbixin: Shirkii Shidaalka Soomaaliya ee London
Shaki badan ayaa la geliyey shirkii ka dhacay magaalada London shaley ee looga arrinsanayay arrimaha shidaalka Soomaaliya.
Tartan Orod oo Hargeysa Lagu Qabtay
Tartanka orod-ka dheer oo ay ka qayb-galayeen orod-yahanno ka kala socda Somaliland, Jabuuti iyo Itoobiya ayaa maanta lagu qabtay Hargeysa.
Boosaaso: Dad loo soo Xiray Falal Amni Darro
Booliiska Puntland ayaa ku dhowaaqay hawl-gallo amni oo ay ka samaynayaan magaalada Boosaaso.
Filin Gabar Soomaaliyeed laga Sameeyey oo Washington lagu Daawadey
Shirka shidaalka Soomaaliya oo London ka furmay
Magaalada London ee dalka Britain waxaa maanta ka furmay shir looga hadlayo arrimaha shidaalka Soomaaliya, oo ay ka qeyb galayaan shirkadda Spectrum ee dalka Norway laga leeyahay oo sahan ku sameysay shidaalka Soomaaliya iyo shirkado kale oo ay casuuntay iyo dowladda Soomaaliya.
Wasiir hore oo ku baaqay wada-hadal lala galo Al-Shabaab
Wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya xildhibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed ayaa ku baaqay in wada-hadal lala galo kooxda Al-Shabaab.